शब्दकोश: November 2010
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, November 30, 2010 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, November 22, 2010 8 : Comments
सरकारले बजेट पेस गर्न लागेको शुक्रबारे संसद्‌को भद्रगोलले माओवादीइतरका दलहरूबाट संसद्‌को इतिहासमै कालो दिनको संज्ञा पायो । अर्थतन्त्रको समेत कालो दिनको रूपमा वर्णित यो ‘संसदीय चित्रहार’ले निराशापूर्ण राजनीतिको कसिङ्गर झेलिरहेका नागरिकको भावदशाको डिग्रीले अझ फनक्कै नकारात्मक उचाइ समाएको छ । यो खासमा ‘एलर्जीको पराकाष्‍ठा’ नै हो । दिक्क लाग्ने पनि सीमा हुन्छ, त्यसभन्दा पछि अरू थोक नै लाग्छ । नागरिक र मुलुकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राजनीति गर्ने नाममा घिनलाग्दो दहमा भ्यागुता समान एकापसमा टर्टराइरहेका नेता (?) हरूप्रतिको विश्वास त उठ्दै गएको छ नै, अब यिनले जेसुकै नौटङ्की गरे पनि के अचम्म भयो र भन्ने स्थिति देखिएको छ । संसद्‌मा बजेट घोषणाका लागि तय गरिएको शुक्रबारे रमितालाई त्यसैको पछिल्लो कडी मान्दा हुन्छ । यिनीहरू जे पनि गर्न निर्लज्ज छन्, नागरिकप्रति जवाफदेहिताको कुरै छाडौँ - आफ्नो नजरमा हुनुपर्ने न्यूनतम नीति र निष्ठा पनि यिनले पचाइसके ।
परिआउँदा एउटै काउछोको माला लगाएर राजतन्त्र धपाएका दलहरू त्यसैको जगमा टेकेर नयाँ संविधान बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आउँदा कसरी यति चाँडै कुकुर-बिरालाको अवतारमा फेरिए, अचम्म लाग्छ । तर यो अचम्म मान्नु पनि हाम्रो नेपालमा अब मूर्खता नै ठहरिने भइसक्यो । “राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्रु र शत्रु हुँदैनन्” भन्ने आहानलाई चरितार्थ गर्दै दलीय जुगलबन्दी कुनै बेला नङ र मासु जस्तै गाँसिन्छ भने कुनै बेला देवलोक र असुर लोकबीचको दूरी जस्तो फाट्छ !
सदनमा शुक्रबार बजेट पेस गर्ने बेलामा भएको धक्काधक्कीमा माओवादी सभासद्‌को दोष कति थियो, यो माओवादीकै पार्टीगत रणनीति थियो कि, यो मूल्याङ्कन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नै । बजेटको सिलबन्दी ब्रिफकेसलाई कति लात हानियो, कस्तो सहमति गरेर बजेट ल्याउन लागिएको थियो, पछि एकाएक कुन कुरा सहमतिविपरीत भयो र माओवादीले बजेटमा भाँजो हाल्यो ? दोषारोपण गर्नेगरी थरीथरीका कुरा आएका छन् । तर, न त नयाँ सरकार बन्ने, न त तत्कालका लागि आर्थिक सङ्कट टार्न बजेट समस्या हल हुने स्थितिले अहिले राजनीतिक शक्तिहरू राम्रो काम गरेर जस बटुल्न नसकेपछि अपजसबाटै भए पनि चर्चाको केन्द्रमा ‘शक्तिमठ’का रूपमा स्थापित बन्न खोजेको भान हुन्छ । सरकारको लागि भइरहेको हानाथाप पनि संविधान निर्माणको कार्यभार आफू नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेको जस लिनकै लागि भएको प्रस्टै छ । आफ्नो जस भजाउन मुलुकलाई सुर्कानो गाँठोमा कसिराख्‍न राजनीतिक दलहरूले दिएको अनुमति तिनीहरू आफ्नै लागि समेत खतिको बाटो बनिरहेको पक्कै पनि हेक्का राखिरहेकै होलान् । सबै नालायक देखिए पनि फेरि पनि घुमिफिरि तिनै मुठीभरका मान्छेहरूलाई राष्‍ट्रिय फैसलाको मुखिया बनाउनु हाम्रो विडम्बना भइरहेछ ।
(यसैबीच शुक्रबार राति संसद्‌मा भएको घटना सामान्य भएको र त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने माओवादीले प्रतिक्रिया दिएको छ । उक्त घटना लोकतान्त्रिक व्यवहारकै अर्को पाटो भएको उसको दाबी छ ।)
कुटपिट र घच्ची घमासान नै लोकतान्त्रिक व्यवहार हुने कति हास्यास्पद !
यसबाटै बुझौँ, यो मुलुकमा यसभन्दा झन् असामान्य हुन के-कति बाँकी होला त, अरू कतिसम्मका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले मुलुकलाई आहत पारिने हो ? आफ्नै आँखाबाट देश नहेर्ने आजका धृतराष्ट्रहरूले कहिले बुझ्लान् मर्म - तिनीहरूले खाने एक छाकको मोलबाट कुना-कन्दरामा एउटा परिवार नै पालिन्छ । प्रतीक्षामा छन् ती । यस्तो आँसुको आहाल रहेको यो ठाउँमा यिनले सबै कुरा भुलेर आफ्नो नौटङ्की कहिलेसम्म चालू राख्लान् ?
दुबै तस्बिर : कान्तिपुर दैनिक ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, November 20, 20102: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, November 17, 2010 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, November 15, 20100: Comments
फूल र बत्तीहरूले टोल र बस्ती नै बेहुलीमा परिणत हुने तिहार पर्व ! पाला, दियो र मैनबत्तीमा खुसीको उज्यालो खोज्ने मानिसहरू ।
तिहार आयो कि त अनौठो रोमाञ्चकता सञ्चार हुन्छ ज्यानमा । जब पढाइ र सङ्घर्षको तराजुमा जोखिन जिल्ला छोडेर राजधानी छिरियो, सबै कुरा छरिँदै र भत्किँदै गयो, त्यसमा रमाइला चाडपर्व पनि परे । यसपाली पनि गाउँको आफ्नो चिनाजाना ढुकढुकी लिएर आउने तिहार विरानो रूपमा आयो । भन्न त भन्छन् मान्छेहरू, दसैँमा सबै जना गाउँतिर ओइरिने भएकोले काठमाडौँ सुनसान त हुन्छ नै, नरमाइलो पनि बन्छ । तर तिहारमा भने छ्याप्पै झिलिमिली बत्ती र आतिसबाजी गुन्यामान हुने भएकाले काठमाडौँ नै रमाइलो हुन्छ रे ! मैले भने पोहोर साल जस्तै सहरिया तिहारको रौनक हेरिरहँदा यसपालि पनि त्यो ‘रमाइलो’ बटुल्न सकिनँ । गाउँ नै आँखाभरि जालो बनेर छाइरह्यो ।
यसपाली दसैँमा नै फुलिसकेका थिए उदयपुरमा चक्कीचक्की सयपत्री
तिहारमा देउसी-भैली खेलेर रातै छर्लङ्ग पारेको पुराना दिनहरू सम्झिँदा कुन उत्प्रेरणाले त्यो सबै गर्ने साहस आयो भन्ने लाग्छ अहिले सम्झिँदा । साँच्चै सपना जस्तै ती दिनहरू । उदयपुरको हाम्रो बस्ती स्वर्गको टुक्रा अनि हामी भुराहरू चाहिँ परीको लागि सुहाउँदा राजकुमार जस्ता ! भुरा पनि के भन्नु पट्ठो अल्लारे नै हो । गाउँघरमा केटाहरूको नाम लिँदा गणनाको पहिलो सूचीमै आउँथ्यौँ ! फलानोको छोरो, ढिस्कानोको नाति भनेपछि अझै ‘हाइट’ ह्‌वात्तै बढ्ने । शीतको छाता ओढेरै हल्का खरी झरेको मादल ठटाउँदै, बिट खुकुलिएको डफली ठोक्दै घर-घर चहार्दा हामी रातारात गायक र सङ्गीतकार भइसकेका हुन्थ्यौँ । “देउसी रे” भाका भट्याउनुका साथै क्यासेट होइन मुखबाटै आफ्नो मौलिक गीत सुनाउँदै सांस्कृतिक भ्रमण समेत हामी त्यसैलाई बनाउँथ्यौँ । घरधनी समेत दङ्ग पर्थेँ हाम्रा बेग्लै पाराको देउसी प्रस्तुतिबाट । नत्र त्यस समय अरू देउसे टोली कि त थपडी मात्रै बजाएर, हद भए मादल थटाएर र कतिपय भने क्यासेटमा गीत घन्काएर उफ्रिन्थे । हामीले कुनै गीतलाई रिमिक्स बनाए पनि केही गीत आफैँले खोजेर, लेखेर गाएकाले जहाँ-जहाँ देउसी खेल्थ्यौँ, त्यहाँका घरधनीलाई नयाँपनको स्वाद मिल्थ्यो ।
फिल्म दर्पणछायाको गीत ‘लहनाले जुरायो कि …’ लाई रिमिक्स गरेर गाउँदा ‘उकालीको डाँडैडाँडा कुदे होलान् देउसे भाइ ... ’ बनेको थियो । मादलमा समलाको ताल खोज्दै गाउँको भित्ताभित्तामा हामी देउसे केटा उफ्रिन पाउँदा मन फुरुङ्ग भएको थियो ।
काठमाडौँको तीनकुनेमा यसपाली देउसी खेल्दै गरेका फुच्चेहरू
अर्को मौलिक गीत यसरी झुमेर गाएका थियौँ र भावुक बनाएका थियौँ सबैलाई :
तिहार ऽऽ तिहार ऽऽऽ
माइतीबिना शून्य लाग्छ यो तिहार
चोली भिज्यो आँसुले रुँदा-रुँदा
काठमाडौँको बागबजारमा एउटा पसल अगाडि बनाइएको रङ्गोली
एक सालको देउसी भने सधैँभरि चुर्लुम्म यादमा डुबाउने खालको छ । २०६० सालको कुरा हो । ७-८ भाइ थियौँ देउसी टोलीमा । भोलिपल्ट भाइटीका भए पनि रातैभरिको देउसीमा आँखा कचपल्टिने थाहा हुँदाहुँदै होमिएका थियौँ । घरको खप्कीले के काम गर्थ्यो वर्षमा एकचोटि आउने चाडबाडमा रामरमिताको अगाडि ! बुवादेखि छुलछुल मुते पनि ममीलाई दङ्ग्याएरै भए पनि देउसे टोलीमा सामेल भइएको थियो । बुवाको कुरामा अटेरी हुन पाउँदा विद्रोह नै गरेको जस्तो ढक्क छाती फुल्दा आफूलाई पनि ख्याल मजा नआउने ! “रात-विरात लखरलखर हिँडेर, कालबेला कस्तो छ केही थाहा छैन । चिसो लागेर बिरामी हुनलाई” भन्ने बुवाको मायालु गाली पनि आफूलाई त्यो उमेरमा तीतेपाती हुने ।
देउसी खेल्न सुरु भयो । चुहाडे र बाहुन डाँडा हुँदै खोलापारिको तोरीबारी गाउँसम्म देउसी खेल्ने जोस सबैमा सवार थियो । देउसी खेल्ने लालसा जम्मा भएको पैसा दामासाहीमा २०-४० रुपैयाँ पाउनेभन्दा पनि साथीभाइसँग बहकिन पाउनुको रमाइलो नै थियो । नाच्न नजाने पनि नाचेजस्तो गर्‍यो, गाउनमा सुर नलागे पनि आफूलाई रामकृष्‍ण ढकाल र राजेशपायल राई ठाने भैगो ! :-) (त्यसबेला आधुनिक गायनमा यी गायककै उच्च बोलबाला थियो) । यस्तैमा हाम्रो घरभन्दा थोरै पर रहेको लक्ष्मी म्याडमको घरमा देउसी खेल्न पुगियो । केटाहरूले देउसी खेलेको मन पराउने लक्ष्मी म्याडम । फुरुक्क हुँदै झन् भट्याउन थाल्यौँ -
आहैऽऽ लक्ष्मी म्याडम – देउसी रे !
यतिले भएन – देउसी रे !
छेउमा भाँडामाथि भाँडा खप्टिएको ठाउँमा चुलोबाट धुवाँ पुत्ताइरहेको थियो । के रहेछ भन्दा त रक्सी बनाइँदै रहेछ त्यहाँ । काँचा केटाहरू घरबाट फुकेको कुकुर जस्तै हुन पाएका, रन्थनी छुटिहाल्यो तिनमा । सीपी दर्लामी, नविन राई, प्रदीप कार्की, अङ्कुल थापा, दिलीप यादव, नीराज गिरी, खड्ग माझी र मसहितको टोलीमा कतिपय त ‘हामी त जातले पा’को खान’ भनेर यत्तिकै दन्काइहाल्ने खालका प्राणी थिए । तर म र अरू एक-दुई जना कहिल्यै एक घुट्को छिराएका थिएनौँ । मौका यही हो भन्ने जस्तो भान परिदिए अरूहरूले ।
फेरि झल्को उदयपुरकै : यसपालीको दसैँमा जाँदा फूलबारीमा जुन महक थियो
देउसेहरूलाई रक्सी चखाउन पाउँदा लक्ष्मी म्याडम पनि दङ्ग थिइन् । हुन त म लगायत केहीलाई प्राथमिक तहमा केटाकेटी बेलामा पढाउने उनै लक्ष्नी म्याडम थिइन् । तर यतिबेला समयको अन्तराल निकै पार भइसकेको थियो । म्याडम गाउँकी आन्टी जस्ती भइसकेकी थिइन् । छिमेकीको साइनो जो थियो ।
तुरुरुरु .. .. गिलास भरेर मेरो अगाडि ल्याइसकेछन् केटाहरूले । उहू !! नमीठो हरकले नाक पाछ्‌यो । झ्वाट्ट सोच आयो, नारायण गोपाल, अरूण थापाहरू के खान्थे ? रक्सी त हो नि ! :) त्यस्सै उनेरको गला त्यति सुरिलो भा’को हो र ? रक्सीले औषधिको पो काम गर्छ बाबै ! मैले त्यहाँ पनि केटाहरूको बीच यही कुरा निकालेँ । फिलिलि हाँसे जम्मै । मलाई गिज्याए कि जस्तो लागेर सुरुमा त कार्टुन पो भएँ कि क्या हो भन्ने लाग्यो । भरे भन्दा त देउसी टोलीमा गाउने नाइके मैँ थिएँ, केटाहरूले जानी-जानी मलाई कहाँ बिगार्छन् र भनेर घाँटीतिर सोझ्याएँ गिलास । केटाहरूले पनि ‘हो है हो’ भन्दै गिलास स्वाट्ट पार्न उक्साए । केटाहरू उस्तै फलिलि हाँसिरहेका थिए । घाँटी खिर्‍याउँदै मन तातो झोल पेटमा अवतरण भयो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देउसी खेल्ने सुयोग नमिले पनि अझै गाउँछु म । यत्तिकै हिँडेको बेला खुब सुरमा आएर अनि बाथरुममा लुगा पिटपाट पार्दा पनि ।
स्वर सुरिलो पनि पो छ त मेरो अहिलेका चलनचल्तीका ‘म्युजिक भिडियो गायक’ भन्दा त ! थाहा छैन, त्यो दिन रक्सी खाएको तागतले अझै काम गरिराखेको हो कि ! ;-)
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, November 13, 20105: Comments
Labels: आफ्नै कुरो, स्मरण
हदभन्दा सानो कद
ध्वाँसोमा लपेटिएको जड चोला
उठ्न लागे ठोकिन्छु यसमै
बस्न लागे जकडिन्छु
अहँ सरकार !
म अटाइनँ यो टापु प्रदेशमा ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, November 02, 20104: Comments